ကိုသန်းလွင် - ဆော်ဒီထောက်လှမ်းရေးသမားဟောင်း၏ ကံကြမ္မာ - MoeMaKa Media
Home / Currents / Features / Ko Than Lwin / Saudi Arabia / ကိုသန်းလွင် - ဆော်ဒီထောက်လှမ်းရေးသမားဟောင်း၏ ကံကြမ္မာ
ကိုသန်းလွင် - ဆော်ဒီထောက်လှမ်းရေးသမားဟောင်း၏ ကံကြမ္မာ
Currents, Features, Ko Than Lwin, Saudi Arabia
(မိုးမခ) ဩဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၂၀
ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသား ဆော်လမွန် (MBS- Mohammed Bin Salman) သည် လွန်ခဲ့သော နှစ် အနည်းငယ်က သူ့ပြိုင်ဘက်များကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က ထောက်လှန်ရေးသမားတစ်ယောက်သည်မထင် မရှားနေခဲ့ပြီး မင်းသားအမြင်မှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါသည်။ သူ့ကို အိမ်ရှေ့မင်းသားကအလုပ်ပေးမည်ပြော၍ပြန် လာရန် အကြိမ်ကြိမ်ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အင်တာပို မှတစ်ဆင့်ခြစားမှုပြစ်ဒဏ်များဖြင့် ဝရန်းပြေးအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အင်တာပိုက ဤအမှုသည် နိုင်ငံရေးအငွေ့အသက်များပါသည်ဟုဆိုကာ အရေးမယူခဲ့ပါ။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကမစ္စတာဆားဒေါ့ဇာဘာရီ (Mr.Saad al-Jabri) ၏ညီနှင့်သားသမီးနှစ်ယောက် ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိ်မ်းခဲ့ပါသည်။ ဆွေမျိုးများနှင် ့အမေရိကန်အရာရှိများက ထိုသူတို့ကို ဖမ်းဆီးခြင်းမှာ မစ္စတာ ဇာဘာရီ ကိုပြန်လာစေချင်၍ ထိန်းသိမ်းသည်ဟု စွတ်စွဲကြပါသည်။
ဆော်ဒီအစိုးရထိန်းချုပ်ထားသော မီဒီယာက ဝေါစထရိဂျာနယ်မှ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိတစ်ဦးက မစ္စတာဇာဘာရီ သည်သူနှင့်သူ့ဆွေမျိုးများ ချမ်းသာကြွယ်ဝရေးအတွက်ဆော်ဒီအစိုးရပိုင်ငွေများကို အလွဲသုံး စားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွတ်စွဲခဲ့ပါသည်။
ထိုသတင်းထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် အိမ်ရှေ့မင်းသား၏ ဖခင်ဖြစ်သူမှ ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးမှာကျန်းမာရေး စိုးရိမ်နေရချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေပြီး ဘုရင်ကြီးဆုံးပါးသွားပါက ဆော်လမွန်မင်းသား ( ၃၄ နှစ်) မှာ ဘုရင်ဖြစ်လာ ရန်ရှိပါသည်။ ဆော်ဒီသတင်းစာများက ကြာသပတေးနေ့က ထိုသတင်းကိုဖေါ်ပြရာတွင် ဘုရင်ကြီး၏အသက် ၈၄ နှစ်ရှိပြီးယခုလစောစောပိုင်းကလည်း (Gall Bladder) ကို ခွဲစိတ်၍ကုသခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
သူ့ဖခင်က ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှနေ၍ ဘုရင်ဖြစ်လာချိန်ကစပြီး အိမ်ရှေ့မင်းသားသည် တိုင်းပြည်၏နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေးကိစ္စများတွင် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး အတိုက်အခံများကို ခရီးသွားခွင့်ကန့်သတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်ခြင်း၊ တရားစွဲခြင်းစသည်တို့ဖြင့် အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်ရှေ့မင်းသား၏လုပ်ရပ်များကို ကမ္ဘာက အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ ဆော်ဒီသံရုံးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ဂျာနယ်လစ် ခါရောက်ဂျီ အသတ်ခံရမှုနှင့် ပါတ်သတ်ပြီးစတင် သတိထားမိခဲ့ကြပါသည်။
ဇာဘာရီကို အမေရိကန်ရှိ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများက မိတ်ဆွေအဖြစ်သဘောထားကြပါသည်ဟု ဆီနေတာ ၄ ဦးကအမေရိကန်သမ္မတထရမ့် ထံသို့ စာရေးသား မေတ္တာရပ်ခံကြပါသည်။ အမေရိကန်တို့က တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း သူ၏ ကလေးများလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တက်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။
မစ္စတာဇာဘာရီ၏အတက်အကျမှာ အိမ်ရှေ့မင်းသား၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော အိမ်ရှေ့မင်းသားဟောင်း နေးရက် (Mohammed Bin Nayet) မင်းသားနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဘုရင် အဗ္ဗဒူလာ လက်ထက်တွင် မင်းသားမှာပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အိမ်ရှေ့မင်းသားဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဘာသာဗေဒပညာရှင်၊ (AI Artificial Intelligence) နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ရထားသူ မစ္စတာဇာဘာရီမှာ လုံခြုံရေးကိစ္စများတွင် ထိပ်တန်း အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်လာပါသည်။ လုပ်သက် အနှစ် ၄၀ ရှိပြီး သူသည် အကြမ်းဖက်သမား နိမ်နှင်းရေးအတွက်တာ ဝန်ယူရပါသည်။ အမေရိကန်မှ သံတမန်များ၊ စီအိုင်အေမှအရာရှိ များနှင့်အမြဲတစေ ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရ ပါသည်။ ဇာဘာရီသည် “ပရော်ဖက်ရှင်နယ်” ဖြစ်သည်ဟုအမြဲတစေချီးကျူးကြပါသည်။
သို့သော်ဆော်လမွန်မင်းသား အာဏာရချိန်တွင် မစ္စတာဇာဘာရီ၏ကံကြမ္မာမှာ တဖြေးဖြေးကျဆင်းခဲ့ရပါ သည်။ သူ့ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်နန်းတော်မှ အမိန့်ဖြင့်ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရင်အဗ္ဗဒူလာမှာ ၂၀၁၅တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဆော်လမွန်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်ရှေ့မင်းသား အဖြစ်ဆော်လ မွန်ကိုခန့်မည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ရာမစ္စတာဇာဘာရီသည်တူရကီနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေး တိန်းရှောင်ခဲ့ပါသည်
ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ဆော်လမွန်မင်းသားကဇာဘာရီထံ Tax Message တခုပို့ပေးခဲ့ရာမင်းသားနေးရက် နှင့် ပတ်သတ်၍ ရှင်းလင်းရန် ရှိသည်တို့ကို ရှင်းလင်းရန်ပြန်လာပါဟုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထို Message များကို သတင်းဌာနများသို့ ဖြန့်ဝေရာမှ လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
မစ္စတာဇာဘာရီက အကြောင်းပြန်ခဲ့ရာတွင် ထိုကိစ္စများနှင့် ပါတ်သတ်၍ မင်းသားဆော်လမွန်ဆုံးဖြတ်သ မျှကိုခံရန်အသင့်ရှိသည်ဟု ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဆော်လမွန်မင်းသားက သူ၊ မင်းသားနေးရက် နှင့် ဇာဘာရီတို့ သုံးဦးဆိုင် ဖြေရှင်းမှသာ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ ဇာဘာရီက ကျန်းမာရေးကြောင့်သူ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားသို့ ချက်ချင်းပြန်လာရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါသည်။ မင်းသားက ဤသို့ခေါ် ရသည်မှာ “မဖြစ်မနေရှိနေရမည်” ဖြစ်၍ဟု အကြောင်းကြားသည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် ဆော်လမွန်မင်းသားက နေးရက်ကို အိမ်ရှေ့စံအဖြစ်မှဖယ်ထုတ်ကာ သူကိုယ်တိုင် အိမ်ရှေ့မင်းသားလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မင်းသား နေးရက် ကိုအိမ်တွင်အကျယ်ချုပ်ထားလိုက်ပြီး ဇာဘာရီ၏ ကလေး များ ထိုစဉ်ကအသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ဆာရာနှင့် ၁ဂ နှစ်အရွယ် အိုမာ တို့ကို နိုင်ငံမှထွက်ခွါသွားခွင့်မရှိကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
မစ္စတာဇာဘာရီက မင်းသားဆော်လမွန်ကိုသစ္စာရှိကြောင်းပြောကြားရာ မင်းသားဆော်လမွန်က သူ့ကို အရေးကြီးသော အလုပ်သစ်ကိုလက်ခံရန်ကိုသာထပ်မံပြောဆိုသည်။ သူပြန်လာလျင် ပြဿနာ၏နောက်ခံ အကြောင်းအရာများကို မင်းသားက ရှင်းပြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မင်းသားက ဇာဘာရီကို စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူ များ၊ ပြဿနာရှာသူများကို ကိုင်တွယ်ရန်လူလိုအပ်နေပါသည်ဟု ပြောဆိုသည်။
သူက သူ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ထားခြင်းကိုရုပ်သိမ်းပါရန်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သော် လည်း မင်းသားက အကြောင်းမပြန်ခဲ့ပါ။ ၃ လခန့်ကြာသောအခါ၌လည်း ဇာဘာရီက သူ့သားနှစ်ယောက်ခရီး သွားလာခွင့်ကိုခွင့်ပြုပါရန်နှင့် သူတို့ ၏အတန်းပညာကို ဆက်လက်နိုင်ငံခြားတွင်သင်ကြားခွင့်ပြုပါရန်မေတ္တာရပ် ခံပါသည်။ မင်းသားကတွေ့လျင်ရှင်း ပြပါမည်ဟုသာပြန်လည်ပြောဆိုသည်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ ဇာဘာရီကို ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားသို့ ပြန်လာရန်သာခေါ်သည်။ သူက သားနှင့် သမီး၏ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားရခြင်းမှာ ဇာဘာရီပြန်မလာသေး၍ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လာပါက သူတို့ အနာဂတ်ရေး၊ ဇာဘာရီ၏အနာဂတ်အရေးတို့ကို ဆွေးနွေးလိုကြောင်းပြောပါသည်။
ထို့နောက် မစ္စတာဇာဘာရီကို တူရကီနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရန် ခြိမ်းခြောက်မှုများပါဝင်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ၏အန္တရာယ်မှာ သေချာနေပြီးဖြစ်သဖြင့်သူသည်ကနေဒါနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားရသည်ဟု ကနေဒါမှ နှလုံးဆရာဝန်သားဖြစ်သူ ခါလစ်ဇာဘာရီကပြောဆိုပါသည်။
ဇာဘာရီပြန်လာရန်အတွက် ဆော်ဒီအာဏာပိုင်များက အင်တာပို ၏အကူအညီကိုယူကာ နိုင်ငံခြားများ တွင် ဇာဘာရီကိုဖမ်းပြီး ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကို ပို့ပေးရန်အကူအညီတောင်းလိုက်သည်။ သို့သော်လည်း (Red Notice)ထုတ်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲဘေးမှနိုင်ငံများအနေဖြင့်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်လည်ပို့ပေးပါရန်ကိုသာတောင်းဆို ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇာဘာရီကသူ့နာမည်သည် အင်တာပို၏စာရင်းထဲတွင် ပါရှိနေကြောင်း ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလက အတည်ပြု ပြောကြားပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူ့မိသားစုမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ မှတဆင့် ကနေဒါ နိုင်ငံသို့လာရန် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အင်တာပို ၏စာရင်းတွင်ဇာဘာရီ၏အမည်ကိုပယ်ဖျက်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ အင်တာပို ၏မှတ်တမ်း များအရ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လတွင် အင်တာပိုကသူ၏ အသနားခံစာကို လက်ခံလိုက်သည်။
အင်တာပိုက ရေးသောမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြရာ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ခြစားမှုအရ အရေးယူရန်စာရင်းတွင် အရေးကြီးသော လူရာပေါင်းများစွာသော ဆော်ဒီနိုင်ငံသားများပါဝင်ရာ မင်းသားဆော်လမွန် ကိုဆန့်ကျင်သူ များ ပြိုင်ဖက်များကိုပြိုခွင်းသည့်နည်းမျိုးစုံတွင် ပါဝင်ကြောင်းရေးသားထားသည်။
နိုင်ငံအနေဖြင့် မစ္စတာဇာဘာရီကိုဖိအားပေးရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံတွေ့ရှိပြန်သည်။ မတ်လက နိုင်ငံကိုထွက်ခွါခွင့် ပိတ်ထားသော သားနှင့် သမီးမှာ ဆော်ဒီမြို့တော ်ရီရာဒ် သူတို့အိမ်မှာပင်အဖမ်းခံရသည်။ မေလတွင် ဇာဘာရီ၏ညီဖြစ်သူကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ သူတို့အိမ်များနှင့် အဆက်အသွယ်မရတော့ ကြောင်း ယခုအချိန်သူတို့ဘယ်မှနေသည်မသိရကြောင်း နှလုံးဆရာဝန်သား ဖြစ်သူကပြောသည်။
Ref: Saudi Spy chief Persists in Exile. By Ben Hubbard New York Times July 27 2020.
ကိုသန်းလွင် - ဆော်ဒီထောက်လှမ်းရေးသမားဟောင်း၏ ကံကြမ္မာ Reviewed by MoeMaKa on 4:14 AM Rating: 5